Inona moa Crimea tsara tarehy, noho izany dia ny fahaizan'ity tsy manam-paharoa ity hamadika toerana tsy hay hadinoina ho angano, sy baoritra na birao - any amin'ny toerana tsy hay hadinoina. Ireo mpizahatany ihany koa dia maneso fa any amin'ny tanàna tsirairay, izay tsy tokony hitsangana - na aiza na aiza misy toetr'andro. Manasa antsika hanao fitsidihana fohy amin'ireo tanànan'i Saki any Crimea.
Sehatra, Saki, Crimea
Izay fialan-tsasatra rehetra azonao any Saki dia hisy fanambarana ho anao, raha tsy misy i Crimea ho anao amin'ny resaka fahatsiarovana. Ity dia mankany Bakhchisaray , ary mandeha manodidina an'i Sevastopol, aoka ho azo antoka ny mandeha any amin'ny iray amin'ireo fitsangatsangatsangan'i Saki manerana an'i Krimea mankany Evpatoria. Amin'ny lafiny iray dia mahafinaritra tokoa ny manamarika ny zava-misy fa ao amin'ity tanàna ity no misy ireo mpampiasa seza misy kodiarana fa tsy misy fahafahana mijery ny tanàna noho ireo hafa rehetra. Ny tanjonao dia ny hitady ny vavahadin'ny tobim-pahasalamana miaramila, ary misy mpamily fiarakaretsaka manana tolotra miavaka iray milanja folo taonina.
Ao Saki dia iray amin'ireo antony mahatonga ny olona amin'ny ankapobeny ho any Krimea hitsena azy - ny farihy. Ny siramamy sy ny vovoka no mamela ny mpitsoa-ponenana hameno ny tanjany ary matetika izy ireo dia mamaha olana maro momba ny fahasalamana. Tsy ny filalaovan'ny lakolosy ao amin'ny Farihin'i Saki any Crimea ihany, fa ny vokatra ara-pahasalamana amin'ny atidoha ihany koa, ny fandroana amin'ny gazy karbonika na ny fanjaitra, ny fitsaboana amin'ny rano sira dia manintona ireo mpizaha tany. Amin'ny teny iray, ny fotaka ao Saki dia azo antsoina hoe sambo io toetran'i Crimea io.
Azonao atao ny mitondra ny fanahinao amin'ny hatsaranao ao amin'ny Park Saksky. Ny rivotra mahavariana, ny fitsangatsanganana tsotsotra ao amin'ny fitiliana maro dia hanampy amin'ny fialana amin'ny tontolon'ny zava-manan'izao tontolo izao, ary ny rivotra dia tsy misy latsa-paka.
Ary mazava ho azy fa ny iray amin'ireo mpitsoa-ponenana mahazatra ao Saki sy Crimea manontolo dia orinasa divay. Ny efitrano famafazana "The Seventh Heaven" dia ho tonga toerana iray izay ahafahanao miaina indray ny talentan'ny lehilahy hitombo sy hambolena voaloboka, ary izany koa dia fitaovana tena tsara amin'ny fametahana milina sy afisy.
Nosy Samet, Tailandy
Holiday in Palau
Aotrisy, Zell am See
Schengen visa - fitsipika vaovao
Aiza no mandeha miaraka amin'ilay zaza amin'ny taom-baovao?
Calabria - mpizahatany mpizaha tany
Toerana fitodihan-tanan-kalamanjana any Karelia
9 fampiharana izay hanampy amin'ny famolavolana fotoana malalaka
Mitefoka amin'ny saka
Ahoana no hijerena lafy tsaran-javatra?
Fetin'i Petera sy Paoly - famantarana
Misintona any aoriana
Ny tsiambaratelon'i Brand Victoria dia nanapaka ny fifanarahana tamin'i Gigi Hadid noho ny fiampangan'ny fanavakavaham-bolonkoditra
Matahotra ny rainy ny ankizy - ahoana no hamahana ilay olana?
Ny iray mason'olona - Mythologie slavik
Kiraro eo amin'ny kirany - ireo modely lamaody indrindra sy ny zavatra tokony harahina?
Ankizy Ornella Muti
Ny fiakamanidina ao anaty dobo dia tsara sy ratsy
Rahoviana ianao no hamboly kôkômbra eny an-kalamanjana?
Ny fitohizan'ny ankizy ho an'ny lohataona ho an'ny ankizilahy
Tranon'ny ankizy ho an'ny birao
Ny aretina ao am-po - ny soritr'aretina
Ahoana ny fomba fanaovana masculine?